PaveAI: Onye mechara chọta azịza ya na nchịkọta Google! | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 27, 2017 Mọnde, Febụwarị 27, 2017 Douglas Karr
Ruo ọtụtụ afọ, anyị na ndị ahịa na ndị ọkachamara agba mgba na-eme mkpebi ndị na-adịghị mma dabere na ya nchịkọta. Enwere ọtụtụ adịghị ike, ọkachasị Google Analytics, na ndị mmadụ anaghị ama banyere:
Adịgboroja Okporo ụzọ - nchịkọta okporo ụzọ anaghị agụnye nleta bots mere. Nsogbu bụ na e nwere ọtụtụ bots si n'ebe ahụ na-ekpuchi njirimara ha dị ka bot. Ha na-eleta otu oge maka oge dị mkpirikpi, na-eme ka ọnụego ụba gị na-arịwanye elu ma na-ebelata oge gị na saịtị. N’etinyechaghị ya nke ọma, ị nwere ike ịme mkpebi adịghị mma.
Ghost Traffic / Ozi Ntuziaka - enwere ndị nzuzu n’ebe ahụ spoof gị nchịkọta pixel ma mee ka okporo ụzọ gị na-egosi na ha bụ saịtị ntugharị na nke gị. Nweghị ike igbochi ha ebe ọ bụ na ha anaghị eleta saịtị gị ma ọlị! Ọzọkwa, ịghara ịza ebe nleta ndị ahụ n'aka gị nwere ike imetụta mkpebi gị.
Inadvertent Okporo ụzọ - kedu maka ndị ọbịa bịara na saịtị gị n’uche, ma hapụ maka na ha na-achọ ihe ọzọ? Anyị nwere onye ahịa otu ọkwa dị elu nke ukwuu maka koodu ọkpụkpọ mpaghara redio. Oge ọ bụla e nwere asọmpi na redio, okporo ụzọ ha na-adị elu. Anyị wepụrụ peeji ahụ wee rịọ ka ewepụ ya na igwe nchọta ihe - mana ọ bughị ụzọ bute mbibi na ndị ahịa azụmaahịa ebe ahụ enweghị ike ịchọta ya.
Yabụ kedu ka esi esi nyocha na nkebi gị nchịkọta data ruo n'ókè nwere ike iji ya rụọ ọrụ, nke na-enyere gị aka nyochaa omume ndị ọbịa nke ọma?
PaveAI: Nkọwapụta Nkọwapụta Akpaaka
Nnọọ, PaveAI. PaveAI na-enye gị ohere iwekota Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads (site na Facebook Business Manager) na Mgbasa ozi Twitter. Ha n'elu ikpo okwu na-eji AI algorithm na iche iche mgbakọ na mwepụ na klas na-adabere na ahịa ahịa gị ịchọta data niile ịchọrọ iji mee mkpebi siri ike. Akụkọ ndị ahụ na-enye ngalaba na ihe puru omume ha ịbụ onye ndu ma ọ bụ onye debanyere aha.
Anyị ga-ewepụta usoro ole na ole tụgharịrị Google Analytics gaa n'asụsụ Bekee nke oge a wee gosipụta ụfọdụ ezigbo akụkọ. Anyị ejirila ọtụtụ dashboarding ngwaọrụ jupụta ebe ahụ… mana ọ nweghị nke nyere ndị ahịa anyị nyocha ha chọrọ ma ọ bụ nye anyị nghọta anyị chọrọ iji mee mgbanwe. PaveAI eme ihe abuo! Eziokwu ahụ bụ na ha ga-akọ akụkọ banyere gị nchịkọta ebumnuche na oge nnọkọ dịkwa oke mkpa. Nke a bụ akụkọ nlele:
PaveAI Sample Report - Ndu Ọgbọ
PaveAI na-ahazi data nke ihe karịrị 400 nde ndị nleta kwa ọnwa. Ha na-ewepu spam na-ezo aka na akpaghị aka wee weta data ndenye aha gị na akwụkwọ ozi.
PaveAI: Uru na Jiri Ọnọdụ
Na benchmarking ha, PaveAI enyerela ndị ahịa aka inweta nkezi 37% na-abawanye n'ọgbọ ndu ma ọ bụ revenue mgbe ọnwa atọ gasịrị, na nkezi Njide 2x maka ụlọ ọrụ ihe karịrị otu afọ. Ghara ikwu oge ha na enyere ndị ahịa aka ịchekwa na nyocha na ikpokọta akụkọ sitere na sistemụ ndị dị iche.
Debanye aha maka Ọnwụ PaveAI Na-enweghị Ibọchị 14
Ricnye ọnụahịa bụ incredibly oké ọnụ nyere uru nke data nyere. PaveAI nwekwara ikikere ikike nke ụlọ ọrụ, ikikere nke ụlọ ọrụ, na whitelabeling.
Tags: aiAnalyticsAmamịghe echichenchịkọta emailGoogle Analyticsedu ọgbọpaveaiamụmanchịkọta amụmaihe puru omume